Bhora Valve Zvishongedzo, Valve Mabhora, Valve Zvikamu - Xinzhan
Inoyerera vharuvhu bhora dhizaini zvinoreva maviri zvigaro zvindori zvinoshandiswa kutsigira bhora mune inoyerera yerudzi bhora vharuvhu. Dhizaini iyi inoita kuti bhora riyangarare kana kufamba munzira yekurira kwechigaro kumusoro. Iyi dhizaini inokodzera idiki saizi uye yakaderera yekumanikidza bhora mavhavha.
Hollow vharafu mabhora anogona kugadzirwa nesimbi ndiro yakasungwa, kana nepombi yakasungwa mukati mebhora. Hollow Ball haina kudhura nekuda kwekuti pane simbi shoma inobatanidzwa, uye mumatanho akakura inozopa kune hupenyu hwechigaro zviri nani nekuti kurema kwayo kurerutsa kunoderedza eccentric huremu-zvine chekuita nehuremu kurongedza.
Trunnion Valve Mabhora
Iyo trunnion vharuvhu bhora ine imwe hunde pazasi kugadzirisa iyo bhora. Ndokusaka bhora risingafambe. Aya mabhora anowanikwa nezvinyoro uye nezvigaro zvesimbi zvakagadzirirwa chero kupisa kwakanyanya kana se cryogenic sevhisi.
Wenzhou Xinzhan Valve Bhora Co, Ltd. (XINZHAN) inogadzira yakazvipira kukudziridzwa kwepamusoro-chaiyo, yepamusoro-tekinoroji uye yakawanda-yekuita vharuvhu mabhora. Nayo yakasimba kugadzirwa utsanzi kugona, makore mazhinji 'ekugadzira manejimendi ruzivo, epamberi kugadzirisa uye kuongorora zvivakwa (Western Siemens CNC michina-idenderedzwa grinder, machine centre, idenderedzwa roundness yekuyera chiridzwa, -tatu-dimensional batanidza chiridzwa, nezvimwewo), XINZHAN yakunda kuzivikanwa uye kurumbidzwa kubva kune vekunze nekune dzimwe nyika vatengi.
Kuenzanisa Kwekuumba Maitiro eStainles ...
1. Kukanda nzira: Iyi itsika ...
© Copyright - 2010-2020: All Rights Reserved. Featured Zvigadzirwa - Sitemap 304 Uye 304l Valve Bhora , Balls For Valves , L Pattern Valve Balls , L Type Valve Balls , V-Shaped Valve Balls Manufacturer , Bhora Valve Zvikamu,